तिहारको दिनमा पनि कार्यालय खोल्ने वडाध्यक्ष को ?
प्रकाशित मिति : २० कार्तिक २०७८, शनिबार १३:४५
काठमाडौं । आज बिहान १० बजे भोजपुरको अरुण गाउँपालिका ७ का वडाध्यक्ष डिल्लीराम अधिकारीलाई तिहारको शुभकामना दिन फोन गर्दा उनले म त कार्यालयमै छु भने ।
अचम्म मान्दै फेरि सोधियो ‘किन आज पनि कार्यालय ? उनले सजिलै जवाफ दिए ‘वडावासीको विभिन्न काम हुन सक्छ, भोलि कसैको कतै जानुपर्ने हुन सक्छ त्यसैले अप्ठ्यारो नपरोस् भनेर आएँ’ । उनले कसैलाई सिफारिस दिनुपर्ने हुन सक्नेले पनि तिहारको टिकाको दिन पनि कार्यालय खालेको स्पष्ट पारेका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र) को तर्फबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष अधिकारी आजमात्र होइन आवश्यक परेको बेला अरु बिदाको दिन पनि कार्यालय खोलेर वडाबासीको काम गर्ने गर्छन् । कतिपय अवस्थामा सेवाग्राही वडासम्म आउन नसक्ने भएमा आफैं लेटरप्याड र छापसहित कागजात बोकेर घरै पुग्ने गर्छन् । ‘मलाई वडावासीले केही गर्छ होला हाम्रो लागि भनेर वडाध्यक्ष बनाउनुभएको हो, जे गर्दा सजिलो हुन्छ उहाँहरुलाई त्यस्तै गरिदिन्छु’ उनले भने ‘म सधैं जनताको सेवामा नै लाग्छु, मेरो जिम्मेवारी के हो भन्ने बिर्सिएको छैन ।’
उनले विकास निर्माणका काममा सक्रियता देखाएका छन् । विद्यार्थी राजनीतिबाट अघि बढेका उनले भ्रष्टाचार र अनियमितताको विरोधमा आवाज उठाउँदै आएका छन् । उनले विकास निर्माणका योजनामा कसैसँग कमिशनको कुरा नगरेको र समयमा नै सक्न पहल गर्दै आएको पनि स्पष्ट पारे । ‘स्थानीय तहमा अनियमितता र भ्रष्टाचार हुन्छ भनेर आरोप लाग्ने गरेको छ, सबैलाई एकै नजरले हेर्नु गलत हो ’ उनले भने ‘कतै त्यस्तो हुन सक्छ त्यो बेग्लै कुरा हो तर म भनें केही राम्रो काम गरेर उदाहरणीय बन्छु ।’
वडाध्यक्ष अधिकारीले शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटो, खानेपानीलगायतका क्षेत्रमा प्रशस्तै बजेट विनियोजन गरेका छन् ।